WASIIR ODOWAA oo ku guuleystay shaqadii uu XASAN SH. u xil saaray (Akhri farriinta uu diray) - Caasimada Online
Home Warar WASIIR ODOWAA oo ku guuleystay shaqadii uu XASAN SH. u xil saaray...
WASIIR ODOWAA oo ku guuleystay shaqadii uu XASAN SH. u xil saaray (Akhri farriinta uu diray)
Cadaado (Caasimada Online) – Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xuseen Guuleed ayaa ku guuleystay howshii ugu adkeyd ee uu u xil saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii musharixii uu watay uu ku guuleystay doorashadii amdaxweynaha Galmudug.
Farriintii ugu horeysay ee Wasiir Odowaa u diray madaxweynaha cusub ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed hoos ka akhriso
Hanbalyo! Waxaan hanbalyo u dirayaa Mud. Abdikarim Hussein Guled oo ku guulaystay Madaxweynaha maamulka Galmudug. Waxaan sidoo kale amaanayaa sida musharixiinta guud ahaan ay u tartameen. Waxaa dhacday doorasho xor oo xalaal ah. Dhamaantiin waxaad qayb ka tihiin guul taariikhi ah oo maanta la gaaray. Mud. Abdikarim dadkaad usoo tartantay hogaankooda way ku doorteen ee Allaha kula garab galo u adeegidooda. Hanbalyo mar kale. Soomaaliya ha guulaysato.
Guusha saaxiibada madaxweynaha ayaa timid dadaal aan kala har lahayn oo muddo bilo ah socday, waxaana tani ay rajo fiican gelineysaa damacii kooxd Damjadiid inay mar labaad talada dalka dib ugu soo laabato.